पुरातन समयका भएकोले, समाज सल्लाह मानिसहरू छैन वरिपरि रचनाहरू को स्कर्ट को आफ्नो छिमेकीलाई । त्यो हो, यो छैन आवश्यक आकर्षित गर्न एक विवाहित महिला । तर, तपाईं भने साँच्चै साँच्चै चाहनुहुन्छ, कुनै कुराले असम्भव छ, र मात्र एक विवाहित महिला आकर्षित गर्न र पनि सजिलो छ । प्रश्न के तपाईं लाग्छ, यो बनाउन अर्थमा हेर्न को लागि एक जोडी पुन: खुला गर्न डेटिङ साइटहरु जस्तै यो — यो जवाफ तिमीलाई भेट्न अघि तपाईं एक विवाहित महिला संग, तपाईं बुझ्न गर्नुपर्छ किन तपाईं आवश्यकता. वास्तवमा, संसारको पूर्ण अविवाहित सुंदरियों, जो हुनेछ खुसीसाथ तपाईं संग जानुहोस् सिनेमा क्याफे ओछ्यानमा । तर तपाईं भने त आकर्षित छैन एक मुक्त स्त्रीको, तपाईं पालन गर्नुपर्छ नियम । तपाईं सिक्न सक्दैन आकर्षित गर्न आफ्नो पत्नी संग र एक प्रभावशाली मानिस । वास्तवमा, तपाईं गर्न सक्छन्, महंगा स्वास्थ्य र पनि जीवन । यो स्पष्ट छ कि को प्रकटीकरण को वास्तवमा व्यभिचार, आफ्नो मंगेतर बाहिर गरिनेछ, घर र तपाईं छौं नराम्ररी कुटपिट । यो पूरा गर्न असम्भव छ दुल्हन छ । खैर तिनीहरूलाई गरौं, आनन्द र आनन्द को युवा, जो तिनीहरूले इमानदार भोगे महिना को लागि. पहिलो, यो तपाईं बस याद छैन भने पनि तपाईं राखे सिधै ओछ्यानमा । सबै विचार को आफ्नो जवान पत्नी व्यस्त जवान पति । त्यसैले तपाईं प्रतीक्षा गर्नुपर्छ वर्ष को एक जोडी, जब पहिलो आवेग देख्नासाथ, र त्यहाँ हुनेछ केवल निराशा । दुःखी विवाहित महिला । तपाईं के थाहा कहिल्यै उनको बीच पेय हिंड्न धडकता. यस्तो परिवार छ यो राम्रो छैन चढ्नु गर्न, यो साँच्चै एकदम अमानवीय छ । जबकि, त्यहाँ चढ्नु गर्न सक्छन् भने, तपाईं यो लिन त्यसपछि विवाह । गुमाउन हुनेछ, र मित्र प्राप्त हुनेछ. हो, अनुकूल आवेग पछि तेस्रो भन्नेछु उहाँलाई आफ्नो पत्नी बारे छ उन्मूलन विधि बक्स मा आफ्नो गतिविधिहरु लागि एक पूर्ण आनन्दित परिवार छ भन्ने पहिले नै अवस्थित केही वर्ष मा, अधिमानतः पहिले नै संग छोराछोरीलाई । त्यसैले खुसी महिला देखि आफ्नो आरामदायक, मायालु मीठो गुँडमा पक्रेको छ । त्यो राम्रो र आरामदायी, साँच्चै नीरस छ । यहाँ यो छ.
एक सानो साहसिक महिला चोट छैन, तर आफ्नो स्वतन्त्रता छ छैन खतरा छ । पूरा गर्न यस्तो एक महिला मा कुनै पनि स्थान मा यो पार्क, संग्रहालय, प्रदर्शनी, स्टोर, मा काम, तर बस सडक मा, संलग्न किनभने, सह-कामदारहरूको अन्धा छैनन्, निश्चय नै याद हुनेछ, तपाईं छ कि केहि । र यो बारेमा आफ्नो पत्नी । मा क्याफे तपाईं बस्न सक्छ अर्को गर्न उनको मा तालिका संग एक ट्रेडमार्क»वाक्यांश यस्तो छ कि एक सुन्दर केटी गरिरहेको एक्लै हो।»। यो प्रदर्शनी मा वा संग्रहालय मा तपाईं आउन सक्छ र छलफल प्रदर्शनी छ । सडक मा सोध्न समय वा सडक छ । अनुभव, पनि सोधेर बाटो नजिकैको क्याफे, व्यवस्थापन गर्न तुरुन्तै प्राप्त गर्न महिला । यदि त्यो कुनै योजना छ, त्यो शायद सहमत र बाटो देखाउन, र आफैलाई अनुमति कफी व्यवहार छ । पार्क मा तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न मा कल गर्न आफ्नो सेल फोन तपाईं कि मानिन्छ घाँस मा गुमाए. र तपाईं बस लागि सोध्न उनको फोन कल», एक मित्र छ किनभने आफ्नो फोन मरेको छ». र कल गर्न आफैलाई । यसरी तपाईं प्राप्त हुनेछ उनको फोन नम्बर । पूर्णता वर्तमान मा, एक लाजलाग्दो गुण, र महिला मा»शरीर»पछि खोजे मानिसहरूको बीचमा रूपमा राम्रो रूपमा पातलो छ । पद्धति संग भेट्न यी महिलाहरु यसको आफ्नै विशेषता छ । चयन एक उपयुक्त स्थान लागि तपाईं अन्वेषण गर्न । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने कुराकानी गर्न मा ताजा हावा राम्रो छ, यो दृष्टिकोण एक आकर्षक महिला मा कुनै पनि शान्त ठाउँ । सबै भन्दा राम्रो विकल्प लागि यो — शहर पार्क, वर्ग, आदि. बिना भागन, लागि जाने वा बसिरहेका एक पीठ मा एक महिला र उनको सोध्न कुनै प्रश्न चाहिन्छ भनेर एक अनिवार्य प्रतिक्रिया । उदाहरणका लागि, प्राप्त गर्न कसरी सोध्न एक स्थान र नाम गन्तव्य कि तपाईं आफैलाई थाह छ, र जो नजिक छ । सोध्न महिला तपाईं पकड गर्न भने र त्यो आपत्ति छैन, कुराकानी सुरु र प्राप्त गर्न राम्रो थाहा छ । पूरा महिला उपयुक्त काया को एक संस्थाहरूको लागि एक छुट्टी छ । वजन महिला अक्सर जाने विभिन्न क्याफेहरू, किनभने सामान्यतया जस्तै केहि खान स्वादिष्ट । आउन गर्न, तालिका पछि बस््छ जो एक महिला र सोध्न भने त्यो मन भने, तपाईं तल बस्न वरिपरि । प्रस्ताव मनोरंजन मा उनको आफ्नो खर्च र उनको पूरा बीचको गर्न चाहने सुधार को आकार छ । त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् डेटिङ. उदाहरणका लागि, यो पर्याप्त छ बनाउन महिला एक प्रशंसा को बारे मा उनको आंकडा वा गर्न उनको मदत गर्न सही प्रदर्शन को एक विशेष व्यायाम सफलतापूर्वक भेट्न र कुराकानी गर्न सुरु. ध्यान गर्न आफ्नो सहयोगिहरु, काम मा वा आफ्नो सँगी विद्यार्थीहरूको विश्वविद्यालय मा. सायद तिनीहरूलाई बीचमा, त्यहाँ छ केटीहरूलाई पूर्ण काया, र दिइएको भनेर तिनीहरूले सिक्न र तपाईं संग काम, तिनीहरूले सजिलै पाउन सक्छन् एक साधारण भाषा र सहानुभूति जगाउनु तिर. शारीरिक विवरण र फोटो, गर्न सकिन्छ जो बिना छनौट गर्न सहकर्मी को एक उपयुक्त आकार छ । साथै, हाल वजन महिला कदर गर्दै पर्याप्त साँघुरो सर्कल को पुरुष, त्यसैले यो सामान्यतया साँच्चै चाहनुहुन्छ पूरा गर्न र सधैं राम्रो स्थित गर्न संचार. गर्न धेरै सजिलो प्राप्त गर्न थाहा आकर्षित गर्न एक महिला मदत संग सामाजिक नेटवर्क व्यवस्थापन गर्न । बस पठाउन उनको सोधेर एक सन्देश पूरा गर्न र च्याट । केही रुचि जगाउनु गर्न चासो वार्ताकार, प्रकाशन मा उनको पेज हसाउने जानकारी बच्चाहरु संग मित्र वा नातेदार — छैन, सधैं एक सरल प्रक्रिया छ । छोराछोरीलाई अलग एक सानो लाग्छ वयस्क भन्दा, त्यसैले यो बैठक लागि हामी तयार गर्न आवश्यक छ लागि राम्रो छिटो पाउन बच्चा संग एक साधारण भाषा छ । अग्रिम सोध्न बच्चा को आमाबाबुले कसरी पुरानो छ, उहाँले, छ, के उहाँले गर्न रुचि के मा आफ्नो खाली समय कसरी रूपमा राम्रो, प्रतिक्रिया बैठक अपरिचित संग. त्यसैले तपाईं राम्रो लागि तयार आफ्नो पहिलो बैठक कसरी सोच्न, तपाईं व्यवहार, यो क्षण मा, र कसरी तपाईं के एक कुराकानी सुरु संग एक बच्चा छ । संयोजन गर्न प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो बैठक केही संग मजा छ, जो गर्न सक्षम हुनेछ भाग लिन बच्चा । उदाहरणका लागि, तपाईं पूरा गर्न सक्छन् चिडियाखाना मा, सर्कस, जान एक चलचित्र वा यात्रा मा एक क्याफे छ । यस मामला मा, बच्चा हुनेछ निरन्तर राम्रो मुड मा, र तपाईं महसुस गर्न सक्षम हुनेछ अधिक खुलेर साक्षात्कार समयमा. तपाईं पनि गर्न सक्षम हुनेछ पाउन कुराकानी को एक विषय, उदाहरणका लागि, छलफल गर्न हीरो को कार्टून सँगै छनौट गर्न एक स्वादिष्ट उपचार, आदि. जरूरी बच्चा बनाउन एक सानो उपहार । यो हुन सक्छ एक खेलौना वा मीठो । तपाईंलाई थाहा छ भने आफ्नो सोख गर्न सक्छन्, दिन, उदाहरणका लागि, एक नयाँ चेस सेट, एक राम्रो पुस्तक, आदि. सँगै छन् भने तपाईं मा एक क्याफे, नहिचकिचाउनुहोस् गर्न बच्चा सोध्न बारेमा के उहाँले गर्न रुचि, खान र उहाँले. बारे सोध्न कसरी कुराहरू जाँदैछन् संग आफ्नो नयाँ मित्र, के रोचक कुरा भयो उहाँलाई लागि यो अन्तिम समय हो । एक बच्चाको जीवन अक्सर धेरै सक्रिय छ, र उहाँले तपाईंलाई बताउन सक्छ हास्यास्पद कथाहरू देखि स्कूल जीवन, संचार संग साथीहरूको, आदि. उहाँको प्रशंसा — जस्तै छोराछोरीलाई यो एक धेरै । आफ्नो बच्चा बताउन रोचक कुरा तपाईं बारेमा छ । उदाहरणका लागि वर्णन, आफ्नो कार, को देशहरू जहाँ तपाईं छन्, आफ्नो पेशा हो । गरौं बच्चा सोध्न तपाईं बारे के उहाँले सबैभन्दा चासो छ । पनि तपाईं संग लिन केही स्मृति यस्तो, संग्रह को पत्थर, आकर्षण र अन्य साना आइटम.
केहि दिन आफ्नो नयाँ साथी
रहन छैन अलग र प्रयास मा भाग लिन सबै गतिविधिहरु को बच्चा संग एक बैठक को समयमा उहाँलाई । यदि उहाँले बस्नुभयो खेल्न मिसिन, खेल सामेल.
सवारी सँगै मसिन, गोली ड्यास मा, आदि
सम्झना कि, यो बच्चा गर्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर महसुस, तपाईं छन्»धुन». यस मामला मा, उहाँले बन्द हुनेछ अनुभव गर्न जकडन र अलिकति डर, र तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ थाहा उहाँलाई राम्रो र बुझ्न कसरी निर्माण गर्न सबै भन्दा राम्रो संचार छ । र, सम्झना कि पहिलो पटक छैन गर्नुपर्छ गर्न पनि लामो लिन देखि बच्चा आफ्नो आमाबाबुले वा साथीहरूको वा समय संग उहाँले नरमाइलो लाग्यो प्राप्त र गर्न सुरु गर्न सक्छन् चिन्ता छ ।
← पूरा गर्न ब्राजील मा. डेटिङ वयस्क लागि. बिना दर्ता. वास्तविक तस्वीर
मुक्त डेटिङ संग मानिसहरू मा ब्राजील डेटिङ →